Tsy tokony hihazona ny taratasy fiantsoan’ny bakalorea ny sekoly | NewsMada
Tsy tokony hihazona ny taratasy fiantsoan’ny bakalorea ny sekoly
« Misoratra amin’ny anaran’ny mpiadina tsirairay ny taratasy fiantsoana ho an’ny fanadinana bakalorea 2021. Efa nalefa avokoa izany ho an’ireo izay nangataka ny fandefasana azy amin’ny alalan’ny paositra », hoy ny ny talen’ny fanadinam-panajakana eto Antananarivo, Razafindraleva Herisolo, omaly, teny amin’ny foiben’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nomarihiny fa ho an’ireo izay nisafidy ny haka izany eny anivon’ny Direction des examens nationaux (DEN) kosa, entanina haka izany haingana ireo tompony, toy izany koa ireo mpiadina tsy miankina amin’ny sekoly.
Entanina koa ny sekoly hizara avy hatrany ireo taratasy fiantsoana ireo raha vantany vao maharay izany fa tsy hihazona izany noho ny antony hafa toy ny tsy mbola fandoavan’ny mpianatra ny saram-pianarana rehetra. Voalazan’ity tomponandraikitra ity fa tokony hahazo ny taratasy fiantsoana avokoa ireo rehetra izay nisoratra anarana. Nanome toromarika ho an’ny mpianatra izy hanamarina ny mombamomba azy ireo rehetra rehefa maharay ny taratasy fiantsoana, indrindra ny toerana hanaovana ny fanadinana isorohana ny fahadisoana amin’ny andro hanatanterahana izany. Ilaina mandritra ny fanadinana ny taratasy fiantsoana ary ampiarahana amin’ny taratasy fiantsoana tamin’ny adina ara-panatanjahantena.
Ho an’ireo mbola tsy naharay ny taratasy fiantsoana na manana olana mahakasika izany, afaka manatona ny DEN any amin’ny faritra misy azy avy izy ireo. Misokatra hatramin’ny 8 aogositra ho avy izao amin’ny 6 ora hariva ny birao, hoy ny tomponandraikitra. Hotontosaina ny 9 aogositra ka hatramin’ny 19 aogositra ny fanadinam-panjakana bakalorea 2021.